‘कोरोना शुन्य’ बन्यो वुहान, सबै संक्र`मित निको भएर घर फर्के !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/‘कोरोना शुन्य’ बन्यो वुहान, सबै संक्र`मित निको भएर घर फर्के !!
वुहान । कोरोना भाइरस सुरु भएको चीनको वुहानमा अब कुनै संक्र`मित नरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्। पहिलो पटक कोरोना भेटिएको वुहान कोरोना शुन्य बनेको हो। अब त्यहाँका अस्पतालहरुमा कुनैपनि कोरोना संक्र`मित नरहेको बताइएको छ। चिनियाँ समाचार सं`स्था सिन्हवाले कोभिड-१९का कुनैपनि बिरामी वुहानमा नरहेको जनाएको छ।
कोरोना भाइरसलाई नियन्त्र`णमा लिएको चीनले हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहानमा ७६ दिनपछि अर्थात् झण्डै दुई महिना पछि लकडाउन हटाएको थियो। चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका प्रवक्ताले यो उपलब्धि वुहानका स्वास्थ्य`कर्मीहरूको कडा परि`श्रम र भाइरस विरु`द्ध लड्न देशभरबाट वुहा`न पठाइएका व्यक्ति`हरूको सहयोगले सम्भव भएको बताएका छन।
सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हुआका अनुसार वुहानमा अन्तिम बिरामीमा रुपमा अस्पतालमा रहेकाहरुलाई शुक्रबार डिस्चार्ज गरिएको छ। हुबेईको स्वास्थ्य आयोगले शनिबार देखि हालसम्म कोरोना संक्र`मण वा मृ`त्युको कुनै एउटा घटना पनि वुहा`नमा दर्ता नभएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार शुक्रकार ११ बिरामीलाई वुहा`नको अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको थियो। हालसम्म हुबेईमा संक्रमणका ६८ हजार बढि घटनाहरु द`र्ता भएका थिए, जसमध्ये ५० हजार बढि वुहानबाट आएका थिए।
विश्वमा पहिलो पटक कोरोना संक्र`मणको पहिलो घटना जनवरीदेखि चीनमा देखिएको थियो। सबैभन्दा बढी प्रभाव त्यहाँ हुबेई र वुहानमा देखिएको थियो। चीनले आधिकारिक रूपमा डिसेम्बरको अन्तमा वुहानमा कोरोना भाइरस पत्ता लागेको जनाएको छ। तर,२३ जनवरीदेखि साढे पाँच लाख जनसं`ख्या भएको हुबेईमा लकडाउन लागु गरिएको थियो।
अमेरिका र अन्य धेरै देशहरूले चीनको आलोचना गर्दै लकडाउन एकदम ढिलो गरेको र जसका कारण यो भाइरस सारा सं`सारमा फैलिएको आरोप लगाउने गरेका छन्। यो भाइरस वुहानको समुद्री मार्केट अथवा वुहानको प्रयोग`शालाबाट आएको हो भन्ने पनि आरोप लगाइएको थियो। तर,चीनले यसलाई अस्वीकार गर्दै कोरोना भाइरसको जन्म एक वैज्ञानिक प्र`श्न भएको बताएको छ। विज्ञान र चिकि`त्सा जगतमा जगतका लागि प्र`श्न भएको बताउँदै यसको उत्तर खोज्न सकिने चीनले बताउँने गरेको छ।